Wararka - Nidaamka isku dhaca ka hortagga
Waxaan nahay warshad toos ah wiishashka munaaradda Aalaadda ka hortagga isku dhaca.Qalabka wiishka Tower aad ayuu ugu qiimo badan yahay hawlgalkaaga si aad fursad u hesho.Qalabkeena ka hortagga isku dhaca ayaa ka ilaalin doona wiishashka iyo kor u qaadaya inay la xiriiraan qalab kale ama caqabado kale.
Habbee nidaamkaaga si aad u dhaqaajiso soo saarista alaarmiga ka hor iyo hawlaha xakamaynta fogaanta aad u baahan tahay.
Qalabka iska horimaadku wuxuu ilaaliyaa qalabka taagan sidoo kale.Soosaarkeeda digniinta alaarmiga waa la hawlgelin doonaa haddii cutubku ogaado bartilmaameed u socda fogaanta digniinta loo dejiyay.Taasi waxay siinaysaa hawlwadeenadaada wakhti ay ku saxaan ficilka ka hor inta aanu shil qaali ah dhicin.
Nidaamka isku dhaca lidka ku ah waa aalad badbaado ah oo lagaga hortagayo isku dhaca laba wiish ama in ka badan oo ka shaqaynaya isla goobta mashruuca Hal wiishash hal nidaam oo ka hortaga isku dhaca ayaa loo baahan yahay.Qayb kastaa waxay ka kooban tahay bandhig, kormeerayaal, xaddidaadyo, qalab raadiyaha, iwm.
Marka laga hadlayo rakibaadda, waxaanu ku siin doonaa buug-gacmeed, muuqaal, iyo tilmaamo online ah oo gargaar ah.Haddii ay ku habboon tahay waxaan u diri doonaa farsamayaqaankeena si uu u sameeyo tababarka injineernimada ama rakibida.Adeegga iibka kadib waa mudnaantayada.
Mobile Crane Qatar, Tusiyaha Dakhliga Load Crane Tower, Badbaadada Salaanka Crane Tower, Tusiyaha daqiiqada Load, Shuruudaha Badbaadada Crane Tower, Nidaamka Isku dhaca Kahortagga ee Wiishka Tower,